नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ५४ पुग्यो ! « MNTVONLINE.COM
नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ५४ पुग्यो !
नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ५४ पुगेको छ । वीरगञ्जमा हिजो थप २ जना मृतकमा संक्रमण पुष्टि भएसँगै मृतकको संख्या ५४ पुगेको हो । हिजो वीरगञ्ज–१६ नगवाका ३५ बर्षीय पुरुषको गण्डक कोरोना अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो । मंगलबार अस्पताल आइपुगेका उनको स्वाबको नमुना लिएर परिक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताईएको छ ।
यसैगरी वीरगञ्जमै हिजो बिहान घरमै मृत्यु भएका थप एक जनामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । वीरगञ्ज–२ छपकैयाका ६५ बर्षिय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । यसैबिच, देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या १९ हजार ५ सय ४७ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा २ सय ७४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएसंगै जम्मा संक्रमितको संख्या १९ हजार ५ सय ४७ पुगेको हो । थपिनेमा काठमाडौं उपत्यकाका ४५ जना रहेका छन् । हाल ५ हजार २ सय २७ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् ।